नेपाल आज | छन्दका चर्चित कवि मनोज भण्डारी भन्छन्, ‘ मलाई कवि मन पर्दैन’ (भिडियोसहित)
छन्दका चर्चित कवि मनोज भण्डारी भन्छन्, ‘ मलाई कवि मन पर्दैन’ (भिडियोसहित)
बिहिबार, २६ बैशाख २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
कुन कवि होला जसलाई लेखक वा कवि मन पर्दैन । झट्ट हेर्दा वा सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । घमण्ड र दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति देखिन सक्छ । तर, त्यसो होइन ।
तपाईंलाई मन पर्ने कवि को हो ? भन्ने प्रश्नमा जवाफ फर्काउँदै कवि मनोज भण्डारीले रोचक जवाफ दिएका हुन् । उनले भने, ‘मलाई कवि होइन, कविता मन पर्छ । अझ कविता भित्रका खास केही पंक्ति मात्र मन पर्छन् । पूरै कविता राम्रो हुँदैन तर भित्रका केही पंक्तिले मन छोइरहेका हुन्छन् । ’
राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले लेखेको ‘गौरी’ राम्रो कृति हो । तर, ‘ गौरी’ भित्रका केही हरफ अन्य भन्दा आफूलाई बढी मन पर्छन भन्दै उनले यसरी सुनाए :
तिम्रो अन्तिमको सिंगार सँगिनी ! कात्रो कसोरी भनूँ
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवाकोटाको खण्डकाब्य ‘मुनामदन’ नेपालीमाझ निकै लोकप्रिय छ । तर, अधिकांश मानिसलाई याद हुने भनेका यी पंक्ति हुन् :
हातका मैला सुनका थैला के गर्नू धनले
साग र सिस्नु खाएको बेश आनन्दी मनले
क्षेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ घीनले छुँदैन
मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन
यस्तै, खास कुनै कवि भन्दा पनि कविता र कविता भित्रका केही हरफ मात्र आफूलाई मन पर्ने गरेको भण्डारी बताउँछन् ।
वाचन भन्दा शब्द बलियो
कवि भण्डारी कविता लेखनसंगै वाचनमा पनि निकै अब्बल छन् । विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम र सामाजिक संजालमा उनको लोकप्रियता कस्तो छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । छन्द कविका रुपमा परिचित भएपनि भण्डारी गद्य र गजल लेखनमा पनि पारंगत छन् ।
चितवन मेघौली घर भएका चर्चित छन्द कवि मनोज भण्डारी हाल बनारसमा संस्कृत ब्याकरणमा आचार्य गरिरहेका छन् । छन्द कविता लेखन र वाचनमा उनको जोडा छैन भने पनि हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘कविताको सशक्त पक्ष भनेकै विषयवस्तु र शब्द हो । उमेर र रुचि अनुसार मान्छेले विषय मन पराउने हो । वाचनले सुनमा सुगन्ध भनेझैं कवितालाई प्रभावकारी बनाउँछ तर शब्द भन्दा बलियो वाचन पक्ष हुँदैन ।’
प्रेम र कविता
भर्खर २३ बर्षमा हिंडिरहेका कवि भण्डारीलाई प्रेमका थुप्रै प्रस्ताव आउने गर्छन् । कति प्रत्यक्ष र कति सामाजिक संजालमार्फत । यसरी प्रस्ताव गर्नेहरु अधिकांश कविता र वाचन मन पराउनेहरु नै रहेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘तर, म हौसिने वहकिने गरेको छैन । आफनो सामाजिक प्रतिष्ठा र लक्ष्य स्पष्ट बुझेकाले त्यस्ता विषयमा परेको छैन र हाल कुनै सोच पनि छैन ।’
आफूले बेलाबेला दारी जुंगा लामै पाल्ने गरेको विषयलाई प्रेम र जीवनसंग नजोड्न उनको आग्रह छ । भण्डारी हाँस्दै भन्छन्, ‘ कहिले पाल्छु, कहिले फालिदिन्छु, यसमा प्रेम वा भनौ वैरागका विषय जोडिएका छैनन् । ’
भाषा बिग्रनुको कारण
भाषा विज्ञान र संस्कृत व्याकरणका अध्येतासमेत रहेका भण्डारीले नेपाली भाषा बिग्रनुको कारण संस्कृत भाषाप्रतिको अनुदार दृष्टि र अंग्रेजी भाषाप्रतिको मोह रहेको दावी गरे । उनका अनुसार संस्कृत सबै भाषा र क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण छ ।
अझ नेपाली भाषाको संरक्षण र समृद्धिका लागि त यो निकै अनिवार्य छ । तर बिडम्बना ! हामीकहाँ राज्यस्तरबाट जुन हिसाबले ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।